Sebenzisa kabusha i-N95 Mask
Ugesi ophethe ngesandla
ICoronavirus isakazeka isuka komunye umuntu iye komunye, lapho umuntu ehlangana nokufihlwa komuntu onegciwane. Ukungasebenzi kwegciwane kuthinta indlela yokudlulisela ngqo. Ukugqoka imaskhi kungakuvimbela ekungeniseni i-virus emacongeni ngqo.Khumbula ukugeza izandla zakho njalo okungavimba leli gciwane ukuthi lingangeni emzimbeni wakho ngezandla.
Imaskhi ye-KN95 ingasetjenziswa godu ngaphasi kwezimo ezijwayelekile. Kodwa uma imaski ilimele futhi inamabala, kufanele ithathelwe indawo ngokushesha leso.
Ngabe imaski ye-KN95 isetshenziswa kaninginingi ngemuva kokuthola isifo magciwane?
Umuntu othile kunethiwekhi usebenzise i-blower enamandla aphezulu ukushaya imizuzu engama-30 futhi afafazwe ngotshwala bezokwelapha ukuze abulale amagciwane kanye nesifutho, wase esebenzisa imaski ephindaphindwe ka-N95.
Kodwa-ke, ochwepheshe baphakamisa ukuthi bangakwenzi lokhu. Abantu abaningi bacabanga ukusebenzisa umshini wokuphehla ugesi onamandla amakhulu ukushaya imaskhi imizuzu engama-30, bafafaze ingaphakathi nangaphandle kwemaski ngotshwala bezokwelapha futhi banethemba lokubulala leli gciwane elinamathiselwe ngaphezulu balibuyisele kabusha. Kodwa-ke, izoshintsha ukungcola kwe-fiber yemaskhi ye-N95 futhi ngeke idlale indima enhle yokuvikela.
Uma abantu begqoka imaskhi engu-N95 endaweni enabantu abambalwa, abantu bangayisebenzisa kaninginingi izikhathi ezi-5, bayibuyisele endaweni eyomile bese ingena umoya ophansi.Asikho isidingo sokushisa nokufafaza utshwala.
Uma abantu besendaweni enabantu abaningi, njengesibhedlela, kungcono ukukubuyisela njalo. Amamaski wokuhlinza ajwayelekile awanconyelwa ukusetshenziswa okuphindwayo.Ihora le-2-4 lihamba phambili.
Isikhathi sokuthumela: Jun-23-2020
ISHENZHEN XINYUANJIAYE COCHNOLOGY CO., LTD